टिप्पणी शनिबार, मंसिर ७, २०७६
सरकारले २० लाख विदेशी पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्यका साथ ‘भ्रमण वर्ष २०२०’ घोषणा गरेको छ । घोषणासँगै निजी र सरकारी दुवै क्षेत्रले आआफ्नै ढङ्गले तयारी गरिरहेका छन् । पर्यटकका लागि नयाँ–नयाँ होटलहरू सुगमदेखि दुर्गम दूरदराजसम्म धमाधम बनिरहेका छन् ।
आवागमनका लागि बस, जहाज, अन्तर्राष्ट्रिय एअरपोर्ट आदिको प्रबन्ध द्रुत गतिमा भइरहेको देखिन्छ । समग्रमा भ्रमण वर्ष सफल पार्न सरकार हौसिएको छ । हौसिंदा कतिपय ठाउँमा गडबडी पनि भएको छ ।
कोही घुम्न आउलान् कि भन्ने डरले बाटो भत्काएर, बनाउँदा बनाउँदैको पुल अलपत्र छाडेर, परिसरभित्र फोहोर थुपारेर, झाडी पालेर, पोखरी फोहोर बनाएर तर्साउन बसे जस्तो देखिन्छ, लुम्बिनी । लुम्बिनीको विरुप अवस्था टुलुटुलु हेरिरहेको सरकारले ‘भ्रमण वर्ष २०२०’ का लागि गरेको तयारीको खबरले कसरी उत्साह देओस् खै ?
पर्यटकलाई नेपाल भित्र्याएपछि के देखाउने ? व्यवसायी सौराहामा राति–राति जीप सफारी गराएर घुमाउने ‘दिवा सपना’ देखिरहेका छन् भने सरकार चाहिं पर्यटकलाई ‘नारायणहिटीभित्र खाना खुवाउने’ तयारी गर्दैछ ।
साँझ ६ बजेदेखि ९ बजेसम्म पर्यटकलाई नारायणहिटी दरबार सङ्ग्रहालय घुमाउने र त्यहाँको लमजुङ खण्ड (कोठा) मा पर्यटकसँग महँगो पैसा लिएर राजकीय भोज खुवाउने सरकारी योजना अखबारमा आएको छ ।
नारायणहिटी सङ्ग्रहालयको प्रत्येक भुइँ र भित्ताको ऐतिहासिक महत्व छ । सङ्ग्रहालयभित्रको डिजाइनका राष्ट्रिय\_अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य र मान्यतालाई आत्मसात् गर्दै यसको गरिमा जोगाउनुपर्छ । रातिराति डुल्ने, भतेर खाने र फोटो खिचाउने ठाउँ होइन, यो ।
राजाहरूको निवास र दरबार हत्याकाण्ड स्थल भएकाले अत्यधिक चासो भएको ठाउँ हो, नारायणहिटी । नेपाली राजसंस्थाको धेरथोर इतिहास बुझेका हरेक विदेशी पर्यटक पनि पस्न र हेर्न रहर गर्ने ठाउँ हो, यो ।
सम्पदा संरक्षणको मर्म बुझेका विज्ञहरूको मत, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास सबै हेरेर अत्यन्त सुविचारित गुरुयोजना बनाई त्यसै अनुरूप संरक्षण, मर्मत र अन्य कामहरू गरिनुपर्छ ।
नारायणहिटीभित्रको रात्रिकालीन भतेरको चर्चासँगै सौराहाको रात्रिकालीन सफारीको रहरले पनि संरक्षणप्रेमीलाई झस्काएको छ । ताल विनाको पोखरा र जङ्गली जनावर विनाको सौराहाको कल्पना गरियो भने त्यहाँको पर्यटन ओरालो झर्छ ।
नारायणहिटी परिसर ठूलो छ । दरबार भव्य र सुन्दर छ । त्यसैले यसको जतन गरिनुपर्छ । पर्यटकलाई सम्साँझै होटलभित्र पठाउनुपर्छ भन्ने होइन तर रातिराति घुमाउने यी विकल्पहरू पनि उचित छैनन् ।
सौराहामा दिउँसोको गतिविधि, तडकभडक र कोलाहल नै सम्हालिनसक्नु भैसकेको छ । दिउँसोको पर्यटकीय गतिविधि र जङ्गल सफारीमै लगाम कस्नुपर्ने अवस्था आइसकेको सौराहामा रात्रिकालीन जीप सफारीको प्रस्ताव आउनु दुर्भाग्यपूर्ण छ ।
रातदिनको हल्लाखल्लाले जङ्गली जनावर लखेटिने वा आफैंमाथि आक्रमण गर्न आउने खतरालाई बेवास्ता गरिनुहुन्न । रातको समयमा जङ्गली जनावरले आनन्दले सुत्न वा जङ्गलभित्र विचरण गर्न पाउनुपर्‍यो ।
रातको समयमा जीपको घारघुर र पर्यटकको हाहाहुहुले जीवजन्तुलाई गम्भीर असर पर्छ र अन्ततः त्यहाँको पर्यटन नै थलिन्छ ।
नेपालको पोखरा, सौराहा, लुम्बिनी वा अन्यत्र कतैको पर्यटन भन्नु नै प्रकृति र संस्कृतिको अन्तरघुलन हो । सौराहा सेरोफेरोलाई प्रकृति र संस्कृतिले दिन सक्नेसम्म दिएको छ ।
संसारभरका मान्छे तान्ने खूबी सौराहासँग छ— हात्ती, गैंडा र अनेक लोपोन्मुख जनावरहरूको वासस्थान, थारू संस्कृति, उर्वर भूमि, सुन्दर भूदृश्य र सहज बाटो, बसदेखि जहाजसम्म ।
उचित विकल्पसहित पर्यटकलाई दिनरातै घुमाउन सकिन्छ । छानो उधिनेर आकाश र जग उधिनेर पाताल देखाउने लहडभन्दा माथि उठेर भ्रमण वर्ष सफल बनाउन रहर गर्नेको जय होस् !